Dagaal ka dhacay Gobolka Baay & faah faahin laga helayo | Wardeeq 24 TV
Home Warar-ka Dagaal ka dhacay Gobolka Baay & faah faahin laga helayo
Dagaal ka dhacay Gobolka Baay & faah faahin laga helayo
Dagaalka oo u dhaxeeyay Ciidamada Dowladda Soomaaliya iyo kuwa Koonfur Galbeed oo dhinac ah iyo Al-Shabaab ayaa waxaa uu ka dhacay degmada Diinsoor ee Gobolka Baay.
Dagaalka ayaa waxaa uu yimid kadib markii Xubno ka tirsan Ururka Al-Shabaab ay dhowr jiho ka weerareen Saldhiga Ciidamada ay ku leeyihiin degmada Diiinsoor, waxaana halkaasi ka dhacay dagaal la isku adeegsday hubka noocyadiisa kala duwan.
Qaar kamid ah dadka ku nool degmada Diinsoor ayaa waxaa ay sheegeen inay maqlayeen dhawaqa rasaasta ay isku adeegsanayeen labada dhinac, balse aysan weli kala cadeyn karin khasaaraha ka dhashay dagaalka.
Saraakiil ka tirsan Ciidamada Daraawiishta Koonfur Galbeed ayaa dhankooda waxaa ay sheegeen inay iaka difaaceen weerarkii kaga yimid dhinaca Al-Shabaab, isla markaana qasaaro xoogan ay gaarsiiyeen.
Dhowr jeer ayay Al-Shabaab weerareen degmada Diinsoor oo kamid ah degaannada hoostaga Magaalada Baydhabo ee Xarunta Gobolka Baay, halkaas oo dagaal xoogan uu ku dhexmaray Ciidamada dowladda iyo Al-Shabaab.
Previous articleSarkaal ka tirsanaa Al-Shabaab ‘oo howl-gal lagu dilay’ + Magaca
Next articleCiidamada Afghanistan ayaa qorsheynaya weerar rogaal celis ah oo ka dhan ah Taliban ee waqooyiga: Warbixin